Sei Vanhu Vachiti Mwari Ane Utsinye?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bicol Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Norwegian Nzema Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Telugu Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Uruund Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
NYAYA IRI PAKAVHA: MWARI ANE UTSINYE HERE?
MUBVUNZO wokuti “Mwari ane utsinye here?” unokushamisa here? Vamwe vanoti Mwari haana utsinye asi vakawanda vanonetseka kana chiri chokwadi kuti Mwari ane utsinye kana kuti vanotofunga kuti anahwo. Sei vachidaro?
Vamwe vanopona panjodzi dzinongoitika dzoga vanobvunza kuti: “Nei Mwari achirega zvinhu zvakadaro zvichiitika? Haana basa nazvo here? Kana kuti ane utsinye here?”
Vamwe vanonetsekawo pavanoverenga Bhaibheri. Pavanoona nhoroondo dzakadai seyaNoa neMafashamo vanonetseka kuti, ‘Nei Mwari ane rudo akauraya vanhu vose ivavo? Ane utsinye here?’
Unombozvibvunza mibvunzo yakadaro here? Kana kuti unombotadza here kupindura vaya vanonetseka kana Mwari aine utsinye? Chero zvingava zvichiitika kwauri, funga nezvemumwe mubvunzo ungakubatsira.
NEI TICHIVENGA UTSINYE?
Tinovenga utsinye nokuti tagara tichingoda zvakanaka uye tichivenga zvakaipa. Takasiyana chaizvo nemhuka panyaya iyi. Musiki wedu akatisika “nomufananidzo wake.” (Genesisi 1:27) Izvozvo zvinorevei? Zvinoreva kuti Mwari akatisika tichikwanisa kuratidza unhu hwake uye maonero aanoita zvakanaka nezvakaipa. Funga izvi: Kana Mwari ari iye akatipa unhu hwokuda zvakanaka uye hwokuvenga zvakaipa uhwo hunoita kuti tivenge utsinye, izvozvo hazviratidzi kuti anovengawo utsinye here?
Bhaibheri rinotsigira pfungwa iyoyo, nokuti mariri, Mwari anotiudza kuti: “Nzira dzangu dzakakwirira kupfuura nzira dzenyu, uye kufunga kwangu kupfuura kufunga kwenyu.” (Isaya 55:9) Kana tikati Mwari ane utsinye, hazviratidzi here kuti tava kupikisana nezviri muShoko rake, tichiita sokuti nzira dzedu dzakakwirira kupfuura dzake? Kuchenjera kuti titange tanzwisisa zvakawanda tisati tafunga kuti Mwari ane utsinye. Pane kubvunza kuti Mwari ane utsinye here, pamwe tingatofanira kubvunza kuti nei zvimwe zvaakaita zvichiita sokuti ane utsinye. Kuti tibatsirwe, ngatimboonai zvinonyatsorehwa neshoko rokuti “utsinye.”
Kana tikati mumwe munhu ane utsinye, tinenge tichireva kuti ane mwoyo wakaipa. Munhu ane utsinye anofarira kuona vamwe vachitambura kana kuti haana basa nokutambura kwavo. Saka baba vanoranga mwana wavo nokuti vanongonakidzwa nokumurwadzisa vanenge vaine utsinye. Asi baba vanoranga mwana wavo vachida kuti adzidze uye vachimudzivirira ndibaba vakanaka. Sezvo kakawanda zvisiri nyore kuziva kuti vanhu vari kuitirei zvimwe zvinhu, zviri nyore kuvafungira zvisiri izvo.
Ngatimboongororai zvikonzero zviviri pane zvakawanda zvinoita kuti vanhu vafunge kuti Mwari ane utsinye. Chokutanga injodzi dzinongoitika dzega uye chechipiri inhoroondo dziri muBhaibheri dzokurangwa kwakaitwa vamwe vanhu naMwari. Pane here zvinonyatsoratidza kuti Mwari ane utsinye?